शाक्यको नियुक्तीले केयुकेएलमा ठेकेदार कर्मचारीहरुको भोज, २५ वर्षसम्म कर्मचारी सरुवा नहुने संस्था केयुकेएल | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
शाक्यको नियुक्तीले केयुकेएलमा ठेकेदार कर्मचारीहरुको भोज, २५ वर्षसम्म कर्मचारी सरुवा नहुने संस्था केयुकेएल
काठमाडौं । १० वर्षे जनयुद्धका कमाण्डर तथा दुईतिहाई बहुमत नजिकको पार्टीका अध्यक्षकि बुहारी खानेपानी मन्त्री भएकि छन ।
उनी मन्त्री भएको पनि दुई बर्ष लाग्न थालिसकेको छ । उनले खानेपानीका सुधारका लागि कमाण्डरहरु पनि छानिसकेकि छन । तर, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको अनियमितता र भ्रष्टाचारको काँडो उखेल्ने जनताको अपेक्षामा कालो बादल लागेको छ । उनी काँडो उखेल्न होइन रोपेर झाँगिन मलजल पो गर्दि रहिछन । यसको पछिल्लो उहाहरण हो केयूकेएलको प्रशासकिय कार्यकारी प्रमुख (सिईओ) नियुक्ति ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका अधिकांश प्राविधक कर्मचारीहरु कर्मचारी मात्र छैनन, उनीहरु खानेपानीका ठेकेदार पनि हुन । यहाँ प्राविधिक कार्यालय प्रमुखको हेरफेर होला तर, अन्य कर्मचारीहरुको सरुवा हुनु मुस्किल नै पर्छ किन कि उनीहरु कर्मचारी मात्र नभएर ठेकेदार पनि हुन । उनीहरुको सेटिङ तल देखि माथि (सिईओ) सम्म नै हुन्छ । यहाँ २५ वर्षदेखि सुपरभाइजर, प्राविधिक अधिकृतहरुको सरुवा हुन सकेको छैन । अब झन हुने कल्पना समेत गर्न सकिदैन । ती नै ठेकेदार कर्मचारीका संरक्षक मिलन शाक्यलाई मन्त्री वीना मगरको आर्शिवाद छ ।
प्रदुषण, पाइपलाइन, ढक निर्माण, पाइपलाइन मर्मत र समान खरिदसम्मका काममा शाखाका ठेकेदारहरुले फाइल घुमाउदै हिड्ने गर्दछन । उनीहरु काम हेरि पहिले नै नगद खुवाउदै हिड्ने गरेको समाचार स्रोतको दावी छ ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा (सिईओ)मा मिलन शाक्यको नियुक्ति भएपछि उनको क्षमतामा धेरै टिक्का टिप्पणी शुरु भएका छन । उनको ४ वर्षे कार्यकाल पुरा हुने कुरामा धेरैले शंका उठाएका छन । पैसाका लागि निक्कै तल्लो स्तरको काम गर्न समेतपछि नपर्ने शाक्यबाट संस्थाको सुधारको लागि केहि काम हुन नस्कने जानकारहरुको तर्क रहेको छ ।
गत चैत्र ११ गते कोरोना भाइरसको महामारी रोकथामको लागि भन्दै सरकारले लकडाउन गरेपछि रातारात काठमाडौंका केहि स्थानमा खानेपानीका टैंङकि राखेको केयूएलले पुनः एक पटक पनि ति टैंङकि फर्केर पनि हेरेका देखिएन । यतिसम्म सुधारका काम गर्ने शाक्यले भविष्यमा मन्त्री र वोर्डको नाक कसरी जोगाउलान त्यो भने प्रतिक्षाकै विषय भएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस सनसिटी अपार्टमेन्टमा र्‍यापिड टेस्ट बुधबार बिहान साढे नौ बजेबाट सुरु
अप्ठारो परेका समयमा २–४ लाखको जोहोलाई मात्र उपलब्धी मान्नुलाई महत्व दिर्दै जाने हो भने मेलम्चीको पानी काठमाडौंबासीलाई वितरण गर्न नयाँ निजी अप्रेटर खोजेर तत्कालको गर्जो टार्नेनितिलाई उपलब्धी मान्ने हो भन,े त्यो बेल्लै कुरा हुन सक्ला ?
खानेपानीका केहि धमिराहरुले काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी वितरणका लागि निजि कम्पनी समेत दर्ता गरेर तयारी अवस्थामा नरहेका भने छैनन । अन्तमा
केयुकेएलले यीनै निजि कम्पनीसँग लम्पसार परेर आफ्नो लाज नछोप्लान भन्न सकिने अवस्था छैन । केयुकेएलका सिईओ मिलन शाक्य लागतको मिलिभगतमा केहि पूर्व खानेपानीकै सिईओहरुको समुहले मेलम्चीको पानीको अप्रेटरको काम ठेक्कामा लिने र दिने तयारी धेरै पहिले देखिनै गर्दै आएका छन ।
यहि कामको सहजिकरणका लागि केयूकेएलमा मिलन शाक्यको नियुक्ती भएको खानेपानीका केहि इमान्दार कर्मचारीहरुको तर्क रहेको छ । खानेपानी मन्त्री मगरसामु केहि चुनौति अवश्य पनि छन् । मन्त्रीले दुई तीन टैंकर पानी र दुई चार लाखको लोभलाई नछोड्ने हो भने मन्त्री मगरलाई पनि राजनितिक इतिहासले अवश्य पनि माफि दिने छैन । भ्रष्टाचारीहरुको साँचि बन्ने कि खानेपानी सुधार्ने त्यो मन्त्रीको विवेक भन्नेहरुलाई मन्त्रीको जवाफ के होला ?
१,भाद्र.२०७७,सोमबार २१:०६ मा प्रकाशित
← नेकपाको सचिवालय बैठकमा बामदेवले गरे कार्यदलको विरोध, प्रधामन्त्री ओली मौन
विदेशबाट हुने उद्धार उडान अनिश्चितकालका लागि स्थगित →